Aamusnaanta ayaa ka wanaagsan riwaayadaha aan loo baahnayn. - qarsoodi - Quotes Pedia
Khibradaha kaladuwan ayaa siyaabo kala duwan noogu kiciya. Laakiin waa inaan dhammaanteen baranaa sidii looga jawaabi lahaa si ku habboon xaaladaha kaladuwan markaa Falcelinteena ayaa macno leh oo ha u abuurin wax saameyn xun ku yeelan qofna.
Mararka qaar, waxaan aad uga naxsan nahay inaan jawaab celinno, oo aad ayaan u jahwareersan nahay. Laakiin waqtiyada qaarkood, waxaan dareemaynaa inaan haysanno ra'yi xoog leh waana inaan sheegnaa taas laakiin had iyo jeer marka hore ka fikir waxyaalaha ku soo kordha. Dib-u-soo-celintaan ayaa laga yaabaa inaysan adiga ku khusayn oo keliya laakiin ay saamayn ku yeelanayso qof kale.
Had iyo jeer miisaamee natiijada natiijooyinkaan marka la barbar dhigo adiga oo ka dhawaaqaya fikirkaaga. Dabcan, iska-hor-imaad wixii khalad ah ee dhacay laakiin markasta garsoor xaaladda intaadan ficil-celin ka hor. Jawaabtaadu waa inaysan saameyn xun ku yeelan dadka kale.
Xusuusnow in had iyo goor ay fiican tahay in la iska ilaaliyo riwaayadaha aan loo baahnayn adoo iska aamusa. Waxaa jiri kara waqtiyo iyo munaasabado badan oo ku habboon oo wax ka qaban kara xaaladda. Markaa, waxaa muhiim ah inaan awoodno inaan xukunno xaaladda oo aan falcelinno ku habboon.
Mararka qaarkood aamusnaanta aamusnaanta ayaa kugu jiida riwaayadaha aan la filayn ee laga yaabo inaadan xitaa jeclayn. Sidaa darteed, markii aad aragto xaalad ay ku kala duwan yihiin fikradaha is khilaafsan oo aragtidaada aysan ku keeni doonin isbadal muhiim ah isla markaaba, aamusnow.
Aamusnaanta aamusnaanta maahan inaad ka fogaaneyso waxa ay tahay inaad sameyso. Si aamusnaan wax u samee maxaa yeelay ficilku wuu ka dheereeyaa ereyada.
Samee shaqada loo baahan yahay oo macno yeelan doonta oo saameyn weyn iyo saameyn togan ku yeelan doonta xallinta arrinta gacanta ku haysa. Taasi waa habka ugu waxtarka badan ee looga hadlo xaalad isla markaana aan lagu jiidin meel aan macno lahayn.
Noqo Tixraacyo Wanaagsan
Kafiican Inaad Aamusnaato Qormooyinka
Qormooyinka Waxyiga Maalmeed
Xigashooyinka ku saabsan Riwaayadaha aan loo baahnayn
Xigashooyinka Akhlaaqda Aamusnaanta
Xigashooyinka aan loo baahnayn
Xigasho xikmad leh
Waxa laga yaabaa inaanan ahayn kii ugu fiicnaa, laakiin waxaan iskudayaa intii karaankeyga ah. - Qarsoodi
Waxa laga yaabaa inaanan ahayn kii ugu fiicnaa, laakiin waxaan iskudayaa intii karaankeyga ah. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Raadi qalbi qurux badan. Khasab maaha wajiga quruxda badan. Dadka quruxda badani had iyo goor ma fiicna. Laakiin dadka wanaagsan marwalba way qurux badan yihiin. - Qarsoodi
Raadi qalbi qurux badan. Khasab maaha wajiga quruxda badan. Dadka quruxda badani had iyo goor ma fiicna. Laakiin way fiicantahay…